Isiqhingi Lampedusa: izinkambo, izibuyekezo, izithombe namahhotela. Kanjani ukuze baye khona?
Lampedusa Island - ipharadesi. Lapha konke okwenzelwa iholidi ikhumbuleke - ecacile nolwandle oluluhlaza kuphela, isihlabathi esimhlophe nelanga elikhanyayo namahhotela enhle.
Ngokusho ososayensi, Lampedusa Isiqhingi yayikhona Bronze Age. Lokhu kuboniswa imivubukulo. Kwatholakala ukuthi isikhathi eside wahlala lapha Barbary Pirates. Kamuva, lesi siqhingi saba impahla uMbuso Sicily. Khona-ke, isiqhingi okungewakho abameleli abakwaHabsburg, futhi kamuva - umndeni UTomasi. Futhi kabusha ithengiswe ababusi esiqhingini laseNaples. Ababaningi abantu bazi ukuthi lesi siqhingi wabonisa isithakazelo ngesiRashiya uMbusi uPawulu I.
Ngemva British wathatha leso siqhingi, waqala ekuthuthukeni kwezolimo ezweni. Utshalwe inhlabathi, bendawo baqala ukukhula amagilebhisi.
Phakathi neNkathi Ephakathi siqhingi lethiwa, okusho izibani ovuthayo ehlane, ngaleyo ndlela besiza ukuba amatilosi eMpumalanga.
Isiqhingi Lampedusa, isithombe ungabona kulesi sihloko kungabesifazane ukuqhuma kwezintaba-mlilo. Itholakala Awukude Sicily (205 km), iyingxenye Pelagie Islands. endaweni yakhe km 20.2 kuphela. Abahlala abadobi yayo futhi isipanji abatshuzi. Ezolimo cishe athuthukile ngenxa yokuntuleka kwamanzi ahlanzekile.
Isimo sezulu esiqhingini sinokuhlasela nakwezifudumele, evumayo kakhulu nesokuphumula. Unyaka wonke efudumele futhi libalele. Isizini izivakashi Uthatha ekuqaleni kuka-April kuya ngasekupheleni kuka-Okthoba.
Ulwandle esiqhingini esikhulu. Ligcwele ezihlukahlukene omkhulu zezinhlanzi. Kuye kwaba njalo abantu balesi siqhingi lesimcoka okokuziphilisa. Ngenxa ubuhle olwandle olujulile kolwandle Lampedusa - ipharadesi diving abathanda.
Basuke bagxila kule edolobheni kuphela esiqhingini igama elifanayo - Lampedusa. Kumnandi ukuhamba ezitaladini zawo lasendulo, zibabaza wekugcina, efana indlu ithoyizi. Ngaphezu kwalokho, isiqhingi Lampedusa idume amachweba yayo olunothile.
Ngo eningizimu-ntshonalanga kukhona siqhingi odumile Lampedusa Onogwaja Onogwaja Beach. izivakashi eziningi cabanga ke omunye emabhishi amahle kunawo 10 emhlabeni.
Isiqhingi onogwaja - endaweni evikelwe National Park. Lapha ukubeka amaqanda ufudu, ababiziweyo caretta. Ukuzalwa abantwana babo izingane ezihambelayo ulwandle senzeka ngasekupheleni kuka-August futhi ekuqaleni kuka-September.
Isiqhingi Lampedusa has eminingi, amatheku, imigodi, amawa, okwenza kube bemthanda kulabo abasebenza endaweni esekusithekeni. Lapho Umoya ushaya kusukela eningizimu, ungakwazi ukuqasha isikebhe ukuvakashela ngasenyakatho esiqhingini Lampedusa, lapho kukhona zigodi nemihume.
Lena yindawo enhle eholidini kulinganiswa wemaviki olwandle. Uma ufuna ukuhambela isiqhingi Lampedusa, izinkambo ungathenga cishe zonke izinkampani travel wezwe lakithi.
Lampedusa Isiqhingi Amahhotela
Lesi siqhingi imayelana 40 amasayithi kwezivakashi. Ngokwesilinganiso izindleko zendawo yokuhlala ruble ayizigidi 4-5 ngosuku. Sizoqala ukuba ezinye zazo.
Maphakathi kunokuthula kulesi siqhingi. At amamitha 200 ukusuka ogwini lwaseMedithera ikhilomitha elilodwa ukusuka ethekwini.
Oscià ehhotela elithokomele lesimanje inikeza izivakashi ngemisebenzi emihle. Ekuseni, kuyadliwa lapha. Vala amathilomu nezindawo zokudlela lapho ungakwazi ukunambitha izitsha of cuisine kazwelonke.
Ekuseni ngovivi ungakhululeka elangeni ithala. It inikeza wezinwele jikelele.
Ezindaweni zomphakathi ehhotela babe free Wi-Fi. Ukuze abashayeli, yokupaka khulula ihlelwe. An on-site-ATM
Oscià Ihhotela likuvumela 26 egqamile futhi amakamelo anesitayela ehlotshisiwe ukuthi zinama-TV LCD, air conditioning. Kukhona yokugezela. Intengo ruble 3400 ngosuku.
Leli hhotela ukhululekile futhi yesimanje Le Pelagie inikeza zonke izimenywa nge inkonzo ezingeni European, kanye nemibandela esihle kakhulu ebhishi ngamaholidi. Ekuseni kuzodingeka kwasekuseni okumnandi. Ngaphezu kwalokho, ihhotela has a bar, lapho bonke labo abafisa lokuphuza iziphuzo wendawo.
Leli deski uhambo ngeke ukukunikeza tour ezithakazelisayo. Izivakashi Ungasebenzisa amasevisi ibhizinisi. Abasebenzi friendly futhi anake ngeke kukwenze libalahla izivakashi. Ngezinye isevisi yakho - ukuqasha imoto.
Leli hhotela elincane inikeza 25 namakamelo abanzi iyezwakala. Basuke ahlotshiswe okwesibhakabhaka nomhlophe. Kukhona imali-Wi-Fi, air conditioning ne-TV. Intengo ruble 3600 ngosuku.
Leli hhotela ikhethwa abathandi zokuzilibazisa esekusithekeni eduze nemvelo. It unikeza:
yokudlela nge amanani eliphusile;
ibha - yindawo lapho ungakhululeka;
Eduze engcwele ka izimfudu nonogwaja ebhishi nge namanzi aluhlaza, isihlabathi esimhlophe kanye izimila ezingavamile.
Amakamelo ukhululekile futhi ethokomele banemibono emangalisa kolwandle. Zonke anemisila namathelevishini, izingcingo, safes air conditioning. Ngaphezu kwalokho, amakamelo mini-bar ne ezihlukahlukene iziphuzo. Intengo ruble 4600 ngosuku.
Ihhotela Martello - 3 *
Leli hhotela itholakala Lampedusa, uhambo kwamaminithi ambalwa 'kusuka ezikhangayo ezifana Isikhumbuzo ukuba umdobi, Cove Guitgia, Parish Church of St Gerland.
Ihhotela has 23 amakamelo ukhululekile ifakwe air conditioning, ama-TV, safes nezinye izinto ezidingekayo. Izindlu zangasese anemisila yonke zokugeza kunesidingo.
Kukhona yokudlela ethokomele ngodondolo yokwamukela futhi enobungane. It ukhonza sasemini kanye dinner.
Izimenywa zingabe ukujabulela amasevisi alandelayo: ubusuku nemini phambi edeskini, khulula sezindiza Shuttle (atholakalayo uma ecelwa).
Qasha zokuhlala esiqhingini kungaba yisisombululo omuhle for holiday yakho. Kuyinto inketho elula hhayi eqolo. Abaningi amafulethi esiqhingini aqashiwe ngokusebenzisa i-ejensi, kodwa kungaba zisuswe futhi ngabanye. Ungathola efulethini amahle ukusebenza nge ukubukwa ulwandle elihle ngokubabazekayo ngemali ephansi impela.
Nezokungcebeleka futhi Ezokuzijabulisa
Abatshuzi nenithanda izizinda ku yezikebhe bayakujabulela ukuvakashela isiqhingi Lampedusa. Phumula kulesi sigaba sama-izivakashi iyamangalisa ngempela. Khumbula ukuthi nazi echwebeni enhle kakhulu. Ungase futhi ukuqasha ibhayisikili noma isithuthuthu bese uthatha uhambo endaweni. Ngesikhathi sebehlezi ogwini ungadlala volleyball.
Ungahambisa azungeze lesi siqhingi ngemoto, okuyinto uzobe inikelwe ukuqasha. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukugibela ebhasini yomphakathi. Uma wayefisa, ihhotela ungabiza itekisi.
Yini ekulethe Island?
Ngokuvamile lezi ezincane, kodwa izinto eziyizikhumbuzo nice - ubucwebe ezenziwe amagobolondo, ahlukahlukene lolwandle izesekeli - shawls, izicathulo, sezimpahla zokubhukuda. izivakashi eziningi ukuletha iwayini kakhulu, ushizi isiNtaliyane, amaswidi.
Uma unesithakazelo esiqhingi Lampedusa, kanjani lapho, sizobe ukukutshela. Lesi siqhingi isikhumulo sezindiza. Linikeza izindiza eziningana kwesizini. Umthwalo esiphezulu sezindiza ngezinyanga zasehlobo.
Ukuze bafike kulesi sezindiza kungenzeka eseRoma, Milan, Catania, Palermo, Bologna. Ngakho kudingeka ukuza komunye wale mizi, futhi ukusuka lapho indiza ngqo kulesi siqhingi.
Isiqhingi Lampedusa: Izibuyekezo
Namuhla, abaningi abantu bakithi kakade wavakashela leli isiqhingi esihle. Ngokusho labo abaye khona, esiqhingini Lampedusa - ekahle kulabo abafuna ukubalekela emzini futhi ujabulele uhlobo. Nasi umuzwa abalandeli olukhulu diving noma beyodoba. Ukudoba isikebhe kungaba kuqashwe.
Abathandi nightlife lapha akumnandi. Yasebusuku esiqhingini ayisebenzi kakhulu. Ezinye izivakashi akhononde Izindleko eziphezulu zokuthola izidingo amathikithi kanye yokuhlala. Noma kunjalo, ukugeleza izivakashi siqhingi luyanda njalo ngonyaka.
Sviblovo Manor eMoscow
Zintathu Square Petersburg: Umlando kanye nokuzwa
Izikhangibavakashi eMoscow - Vologda
Greece, Rhodes. Rhodes Isiqhingi kumephu. Rhodes iholide
Isango Thobekile eCrimea - umuzi eDzhankoy
Yokucasuka entanyeni: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Kuyini umbhedesho ifilosofi, isayensi nenkolo?
Grog - iresiphi zakudala kanye nezinye
Qiniseka osayizi yakho esezingeni iminyango ingaphakathi
Iklabishi ithoswe yathamba nge inyama
Zohlobo elikhulu inja